Moa ve ny COVID-19 nanamora ny fandehanana tao amin'ny Cabo Verde Airlines?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Moa ve ny COVID-19 nanamora ny fandehanana tao amin'ny Cabo Verde Airlines?
Taorian'ny vaovao farany momba ny fiparitahan'ny vaovao Coronavirus (COVID-19, Cabo Verde Airlines (CVA) dia nanavao ny paikadiny hiarovana ny mpandeha rehetra amin'ny sidina voasoratra eo anelanelan'ny 27 febroary sy 30 aprily 2020, ary manolotra ho an'ireo mpanjifa nanampy fahalalahana, safidy ary sanda, miaraka amin'ny fahafaha-manova ny datin'ny dia tsy misy sarany ary reissuances tapakilan'ny tapakila.
Ny tapakila rehetra voatanisa eo anelanelan'ny 27 febroary sy 30 aprily 2020 miaraka amin'ny daty fandehanana tany am-piandohana ka hatramin'ny 30 may 2020, miaraka amin'ny fiaviany / toerana alehany na aiza na aiza ao amin'ny tamba-jotra CVA, dia afaka manova ny famandrihany hatramin'ny 14 andro alohan'ny fiaingany tsy misy sarany na sarany. Ny vanim-potoana fitsangatsanganana an-tsokosoko dia maharitra hatramin'ny 30 Jona 2020.
Ireo mpandeha manana tapakila voasoratra eo anelanelan'ny 27 Febroary sy 30 aprily 2020 mankany / avy any Italia izay mbola tsy nanomboka ny diany dia afaka miverina miverina hatramin'ny 30 Jona 2020 tsy misy sarany na sarany na averina amin'ny volan'ny tapakila.
Ho fiarovana ny mpandeha, ny fiaramanidina Cabo Verde Airlines dia manana fitaovana fisorohana izay misy sarontava sy gel famono otrikaretina.
Ny Cabo Verde Airlines dia manaraka hatrany ny tolo-kevitry ny International Air Transport Association (IATA), ary koa ny tolo-kevitry ny World Health Organization (WHO) ary mitazona fifandraisana maharitra amin'ireo tompon'andraikitra eo an-toerana mba hitandroana ny mpandeha sy ny ekipany.
Cape Verde dia firenena iray any Afrika Andrefana ahitana vondron'ireo nosy Atlantika, andrefan'ny Senegaly. Izy io dia ampahany amin'ny faritry ny nosy fantatra miaraka amin'ny anarana hoe Macaronesia.
Na eo aza ny haavon'ny haavony miaraka amin'ireo nosy 3 nefa be tendrombohitra, ny tsy fisian'ny harena voajanahary, ny fitokanana azy amin'ny firenen-kafa, ary ny mosary manimba amin'ny taonjato faha-20, nahazo laza tsara i Cape Verde tamin'ny fampiroboroboana izay heverina ho mafy orina indrindra demokrasia any Afrika, fari-piainana avo kokoa noho ny ankamaroan'ny firenena afrikanina, ary iray amin'ireo firenena malala-tsaina indrindra amin'ny politika amin'ny kaontinanta sy manerantany.
Etihad Airways: Tsy miandry intsony i Wina
Jamaica dia manamafy ny trangana virus coronavirus COVID-19 voalohany